> Resource> Mac> Olee naghachi ehichapụ nchekwa na Mac
Enwere m ike Naghachi ehichapụ nchekwa na Mac?
M na mberede ehichapụ ezinụlọ ahụ dum nchekwa na m MacBook Pro mmadụ na mberede. M dọkpụụrụ na nchekwa ka Mkpofu na nchekwa ma mgbe ahụ bupụrụ ya. Na m nwere ọtụtụ dị oké ọnụ ahịa ezinụlọ videos na foto na na nchekwa. M mkpa agbake na nchekwa ma biko eme nye m ụfọdụ aro. Ezi echiche.
Ọ bụrụ na i mere nkwado ndabere na mpaghara nke nchekwa na Time Machine, ị nwere ike naghachi-ehichapụ nchekwa Time Machine. Ọ bụrụ na i nwere adịghị, ị na-adịghị na-adị oke nchegbu kwa. N'ezie, na-ehichapụ nchekwa ga-akara dị ka keerughi data na gị Mac. Ya mere, dị ka ogologo oge na-ehichapụ nchekwa bụghị e overwritten site ọhụrụ data na gị Mac, gị nwere ike omume weghachi ya na enyemaka Mac ehichapụ nchekwa mgbake software.
Wondershare Data Recovery for Mac Dị otú ahụ a na omume nke na-enyere gị iji weghachi furu efu nchekwa Mac effortlessly, n'agbanyeghị nchekwa na gị Mac na-efu n'ihi nhichapụ, formatting ma ọ bụ ọbụna ire ure. Site n'enyemaka nke ya, ị nwere ike mfe naghachi fọrọ nke nta niile faịlụ na ụdị si gị furu efu Mac nchekwa, gụnyere photos, ọdịyo faịlụ, videos, akwụkwọ faịlụ, Archive faịlụ na ndị ọzọ. Ugbu a, a ngwá ọrụ bụ Ofụri Esịt dakọtara na MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Obere, wdg
Get a ikpe mbipute nke usoro ihe omume na-amalite Mac ehichapụ nchekwa mgbake ugbu a!
Naghachi ehichapụ nchekwa na Mac na 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Biko adịghị wụnye ngwa na nkebi / olu na gị nchekwa na-ehichapụ si na gị Mac.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode na-amalite Mac ehichapụ nchekwa mgbake
Ẹkedori ngwa na gị Mac na ị ga-ahụ a window dị ka oyiyi n'okpuru.
Naghachi ehichapụ nchekwa Mac, i nwere ike iri "Echefuola File Iweghachite" mode dị ka a mbụ na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 Iṅomi nkebi / olu na nchekwa e ehichapụ
Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-egosi niile partitions / mpịakọta na gị Mac, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu na nchekwa e ehichapụ na pịa "iṅomi" na-amalite na-achọ ehichapụ data na ya.
Nzọụkwụ 3 naghachi ehichapụ nchekwa Mac
Mgbe scanning, hụrụ ọdịnaya na scanned nkebi / olu ga-egosipụta na "nchekwa" ma ọ bụ "File Ụdị" ke window.
Ị nwere ike họrọ gị ehichapụ na nchekwa ma ele otú ọtụtụ nke faịlụ na ya nwere ike gbakee. Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka akara na nchekwa ma ọ bụ faịlụ ị chọrọ iji naghachi na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha azụ gị Mac.
Cheta na: Iji zere data overwritten, biko adịghị ịzọpụta natara nchekwa ma ọ bụ faịlụ azụ mbụ nkebi / olu.
Olee otú iji tọghata FLAC ka MP3 on Mac OS X (El Capitan gụnyere)